7 ဥရောပရှိခရီးသွားလာရန်အတွက်စျေးသက်သာသောနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7ဥရောပရှိခရီးသွားလာရန်အတွက်စျေးသက်သာသောနေရာများ
ဥရောပရှိအလှပဆုံးရှုခင်းအချို့သည်အဖိုးမဖြတ်နိုင်။ ရောက်ရှိရန်လွယ်ကူသည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ကြိုတင်စီစဉ်မထားရင်ဥရောပခရီးစဉ်ကအတော်လေးစျေးကြီးနိုင်ပါတယ်. ဥရောပမြို့တော်အများစုကမင်းရဲ့ခရီးသွားလာရေးဘတ်ဂျက်ကိုတိုးချဲ့လိမ့်မယ်, လုံးဝတတ်နိုင်သောဥရောပ၌ခရီးသွားလာရန်နေရာအတော်များများရှိသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်7ဥရောပသို့သွားရန်အသက်သာဆုံးနေရာများသည်ဘတ်ဂျက်နှင့်အဆင်ပြေပြီးလူတစ် ဦး လျှင်တစ်ရက်လျှင်ယူရို ၅၀ ထက်မပိုပါ.
1. ဥရောပရှိလူကြိုက်အများဆုံးနေရာများ: Cologne, ဂျာမနီ
ဂျာမနီအတော်လေးစျေးကြီးနေစဉ်, Cologne သည်ဥရောပသို့အလည်အပတ်ခရီးအရောက်နိုင်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဘတ်ဂျက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာထိုင်ခင်းမှသည်အထင်ကရအထင်ကရနေရာများနှင့်စျေးပေါသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအထိ, Cologne ကျိန်းသေတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် မြို့ကြီးပြကြီး သင်တစ်ကိုယ်တော်ခရီးသွားခြင်းသို့မဟုတ်မိသားစုယူရိုခရီးစဉ်စီစဉ်ခြင်းရှိပါကရွေးချယ်နိုင်သည်.
ဤသည်ဂျာမန်မြို့ Kolsch ဘီယာနေအိမ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဂျာမန်အစားအစာကိုယူရို ၁.၃ သာရနိုင်ပါတယ်. လှပသော Rhein မြစ်ကမ်းပါးပေါ်တစ်စက္ကန့်၌ပျော်မွေ့ခြင်းထက်ပိုကောင်းသည့်အရာမရှိပါ, မွို့၌တစ်ရက်ပြီးနောက်. ရောင်စုံအိမ်များနှင့်အတူပို့စကတ်ကဲ့သို့ SNAP များအတွက် Ficshmarkt မှတဆင့်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ဟောငျးမြို့တော်ကိုဆက်လက်သေချာပါစေ, Altstadt.
ဖြည့်စွက်ကာ, ဂျာမနီမှာအကျော်ကြားဆုံးအထင်ကရနေရာ, အံ့ဖွယ် Cologne ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုအခမဲ့လည်ပတ်နိုင်သည်. ၎င်း၏ Gothic ဗိသုကာ, ပန်းချီဖန်ပြတင်းပေါက်, နှင့်မြစ်၏အမြင်မော်ကွန်းဖြစ်ကြသည်. သငျသညျအနုပညာကိုချစ်လျှင်, ထို့နောက် Cologne ရှိပါတယ် ပြတိုက်ကြီးတွေ သို့မဟုတ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်လမ်းအနုပညာ Ehrenfeld ၌တည်၏. ဤဒေသသည် Cologne ၏တင်ပါးဆုံရိုးနှင့်ခေတ်မှီသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, ကော်ဖီနှင့်စပျစ်သီးအတွက်နေရာထိုင်ခင်း.
Cologne သည်ဘတ်ဂျက်နှင့်အဆင်ပြေပြီးဥရောပသို့သွားရန်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်ကိုသင်မြင်တွေ့ရသည်. အားလုံးအထက်, ၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးအရာမှာ၎င်းအားအကျိုးရှိစွာနှင့်တတ်နိုင်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်. ဂျာမန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ရထားလမ်းများ, နှင့်လမ်းရထားအလွန်အဆင်ပြေခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုပတ်ပတ်လည်ခရီးသွားလာအချိန်အများကြီးသက်သာသည်. နေ့စဉ်သို့မဟုတ်အပတ်စဉ်ရထားစီးခွင့်ရခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည် ခရီးသွားလာစဉ်ပိုက်ဆံကယ်တင်.
ဘာလင်မှ Aachen ရထားစျေးနှုန်းများ
Cologne ရထားစျေးနှုန်းများမှ Frankfurt
Cologne ရထားစျေးနှုန်းများမှ Dresden
Cologne ရထားစျေးနှုန်းမှ Aachen
2. အသုံး, ဘယ်လ်ဂျီယံ
နံနက်စာအတွက် Waffles သင်တို့ရှိသမျှကိုစူးစမ်းဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ 80 တံတားများနှင့်ချစ်ခြင်းအိုင်, မင်းတုန်းမင်း. Bruges ကတစ် အံ့သြဖွယ်အလယ်ခေတ်မြို့ ဘယ်လ်ဂျီယံနှင့်ဥရောပသို့အလည်အပတ်ခရီးသွားရန်အသင့်တော်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ရဲတိုက်တစ်ခုထူးချွန်အရေအတွက်ကနေ တူးမြောင်းများတွင်လှေစီး, ဘရူဂတ်မှာလုပ်ဖို့တတ်နိုင်သောအရာများစွာကိုရှိပါတယ်, ဘရပ်ဆဲလ်ကနေရထားစီး.
သငျသညျနည်းနည်း splurge ရန်ဆန္ဒရှိလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်အချိန်နှင့်အချိန်ကုန်ငွေကိုချောကလက်အတွက်သုံးသင့်သည်. 'လက်လုပ်' နိမိတ်လက္ခဏာကိုရှာပါ 50 ၏ ချောကလက်ဆိုင်များ အကောင်းဆုံးဘယ်လ်ဂျီယံချောကလက်အဘို့အမွို့၌.
Bruges '' သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားနှင့်မြို့စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းခြေလျင်အပေါ်စူးစမ်းဖို့စူပါလွယ်ကူပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အချိန်ဖြုန်းမနေသင့်. တကယ်တော့, မြို့တော်ကိုလေ့လာရန်နှင့်ယင်း၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အမွေအနှစ်များကိုလေ့လာရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်. ဤနည်းအားဖြင့်သင်တတ်နိုင်သောစားသောက်ဆိုင်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အတွင်းကျကျအကြံပြုချက်များရနိုင်သည်, အမှတ်တရပစ္စည်းစျေးဝယ်, နှင့်အဓိကဆွဲဆောင်မှုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း.
အမ်စတာဒမ်မှ Bruges ရထားစျေးနှုန်း
ဘရပ်ဆဲလ်မှ Bruges ရထားစျေးနှုန်း
Antwerp မှ Bruges မီးရထားစျေးနှုန်းများ
Ghent မှ Bruges ရထားစျေးနှုန်း
3. ဥရောပရှိလူကြိုက်အများဆုံးနေရာများ: ချက် Krumlov, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ
ချက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသည်ဥရောပသို့သွားရန်အသက်သာဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ထို့ကြောင့်လှပသော Cesky Krumlov မြို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်ရှိသည်. ဤရောင်စုံမြို့သည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်သည်, ဘတ်ဂျက် - ဖော်ရွေ. ချက်စ်၏အစားအစာတွင်သင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေလေ့လာရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, ဘီယာမူကြမ်း, နှင့်သင်၏ခရီးသွားဘတ်ဂျက်မှလက်တွေ့ကျကျဘာမျှဖြုန်းစဉ်ကြည့်ရှုခြင်း.
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ထွက်ညစာစားစူပါစျေးပေါသည်, ပြီးတော့သင်က starter ကိုကမ်းလှမ်းသောကြီးစွာသောနေ့လည်စာ menu ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, အဓိကသင်တန်း, နှင့်ရယ်စရာစျေးနှုန်းများအတွက်ဘီယာ. ဘီယာသည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိရေများထက်စျေးသက်သာသောကြောင့်၎င်းကိုနာမည်ကြီးချဉ်သည့်ဝက်အူချောင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်သည်, မင်းဟာညစာကောင်းကောင်းရပြီ.
ထိုမြို့သည်အံ့ cast စရာကောင်းသောရဲတိုက်များနှင့်ဥယျာဉ်များသို့လည်းသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည်, နှင့်သင်မော်ကွန်းအမြင်များတက်သည်ချင်လျှင်, ထို့နောက်မျှော်စင်မှဝင်ပေါက်အခကြေးငွေထက်နည်းသည်5ယူရို. မြို့ကိုစူးစမ်းရန်အခြားကောင်းမွန်သောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာအခမဲ့လမ်းလျှောက်ခရီးစဉ်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်အခြားခရီးသွားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း၊ Cesky Krumlov ပုဂ္ဂလိကမြို့လမ်းလျှောက်ခရီး ဂိုဏ်းအဘို့. ဤနည်းဖြင့်သင်သည်မြို့၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်, ဒဏ္.ာရီ, နှင့်နတ်သမီးပုံပြင်ပြည်သို့အံ့သြဖွယ်ခရီးစဉ်ရှိသည်ဖို့အကြံပေးချက်များ.
4. Eger, ဟန်ဂေရီ
ဟန်ဂေရီဟာဥရောပမှာဈေးအသက်သာဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါ, နှင့် Budapest ထက်ကြည့်ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်. Eger သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောမြို့ဖြစ်သည်, အပူစမ်းနှင့်အတူ, Bukk ဟန်ဂေရီရဲ့ အမျိုးသားဥယျာဉ်, နှင့်လှပသောမှတ်တိုင်များသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်. သင်၏အံ့သြဖွယ်ရာအရာအားလုံးသည်သင်၏ခရီးသွားလာရေးဘတ်ဂျက်ကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲရရှိနိုင်ပါသည်.
Eger သည်ဟန်ဂေရီ၏ကျော်ကြားသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးအရသာအနီရောင်ဝိုင်၏အိမ်ဖြစ်သည်, Bukk တောင်ကြားအကြားတည်ရှိသည်. ရှုခင်းများ သဘာဝမြင်ကွင်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော setting ကိုများအတွက်ပါစေ စပျစ်ရည်ကိုအရသာ လှပသော Bukk ဥယျာဉ်၌တောင်တက်သောနေ့နှင့်သဘာဝစမ်းရေတွင်း၌အပန်းဖြေအနားယူပြီးနောက်. ဟန်ဂေရီသည်ဥရောပရှိအကောင်းဆုံးသဘာဝစမ်းရေတွင်းအချို့၏နေရာဖြစ်သည်, အပူတက်စိမ်ပကတိမဖြစ်မနေဖြစ်ပါတယ်.
Eger သည်ဘူဒါပတ်စ်မှအနားယူသောစနေတနင်္ဂနွေများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်. ရွေးချယ်မှု တစ်ရက်ခရီးစဉ်အကြား သို့မဟုတ်ဘူဒါပက်စ်မှမြို့နားသည်သင်၏ဥစ္စာအားလုံးဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကဒီ enchanting မြို့မှာအနည်းဆုံးရှည်လျားတနင်္ဂနွေဖြုန်းဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်.
မြူးနစ် Budapest ရထားစျေးနှုန်းများမှ
Graz Budapest ရထားစျေးနှုန်းများမှ
5. ဥရောပရှိလူကြိုက်အများဆုံးနေရာများ: Cinque Terre, အီတလီ
တောက်ပသောအိမ်များ, လှပသော Sentiero Azzurro တလျှောက်ထိုင်နေ, Cinque Terre ကိုဗိသုကာဆိုင်ရာအီတလီအံ့စရာဖြစ်စေသည်. Cinque Terre သည်ဥရောပနှင့်အီတလီတို့တွင်ခရီးသွားနိုင်သည့်စျေးအသက်သာဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. အဘယ်အရာကိုမျှအဆင်ပြေခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာအကြားခရီးသွားလာ၏ခံစားချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ5အံ့မခန်းအစက်အပြောက်. ဤခရီးသွားခြင်းသည်သင့်အား Cinque Terre ရထားကဒ်ဖြင့်အချိန်နှင့်ငွေများစွာသက်သာစေသည်.
နေရာထိုင်ခင်းအဘို့, La Spezia ကိုခရီးအတွက်သင်၏အခြေအမြစ်ဖြစ်စေခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ၎င်းသည်လှပသောအီတလီဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်ပြီးဘော်ဒါများနှင့်ဟိုတယ်များစွာရွေးချယ်နိုင်သည်.
Cinque Terre မြင့်မားသောရာသီကာလအတွင်းအတော်လေးအလုပ်များနှင့်စျေးကြီးရရှိသွားတဲ့. ထိုကွောငျ့, နွေ ဦး ရာသီအတွက်သို့မဟုတ်-ပြီလမှဇွန်လအတွင်းသို့မဟုတ်အောက်တိုဘာမှနို ၀ င်ဘာလအတွင်းသို့လည်ပတ်လျှင်၎င်း၏သဘာဝအလှကိုလေးစားရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
La Spezia မှ Riomaggiore ရထားစျေးနှုန်းများ
Florence မှ Riomaggiore ရထားစျေးနှုန်းများ
Riomaggiore ရထားစျေးနှုန်းမှ Modena
Livorno မှ Riomaggiore ရထားစျေးနှုန်းများ
6. ဗီယင်နာ, သြစတြီးယား
မိုဇတ်၏မူလ, Baroque ဗိသုကာ, Schonbrunn နန်းတော်, နှင့်အစိမ်းရောင်ဝင်္, ဗီယင်နာသည်ဘုရားဖြစ်သည်. အချို့သောကြောင့်စျေးကိုအဆမတန်မြှင့်လို့ပြောလိမ့်မည်နေစဉ်, သြစတြီးယားနိုင်ငံ၏မြို့တော်သို့ခရီးစဉ်သည်လုံးဝပြီးဆုံးနိုင်ပြီးပရာ့ဂ်သို့မဟုတ်ဘူဒါပတ်စ်ကဲ့သို့သောအခြားဥရောပမြို့တော်များရှိနေ့စဉ်ခရီးသွားလာရေးဘတ်ဂျက်နှင့်မဝေးပါ။. ဒီမြို့ဟာကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်ကြွယ်ဝသောယဉ်ကျေးမှုကိုလေးစားနိုင်ပါတယ်, အစားအစာ, နှင့်ဗီယင်နာဘဝ၏ကျက်သရေ, သင့်ရဲ့အသက်ငွေစုကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိဘဲ.
သြစတြီးယားမြို့တော်သည်ဥရောပသို့အလည်အပတ်ခရီးအရောက်နိုင်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်, ၎င်း၏ခရီးသွား-ည့် - ဖော်ရွေအပေးအယူမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်. ဥပမာ, ဗီယင်နာကဒ်သည်သင်ပြတိုက်များ၌အထူးလျှော့စျေးများရရှိမည်ဖြစ်သည်, ဆွဲဆောင်မှု, နှင့် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. ဖြည့်စွက်ကာ, သင်ဗီယင်နာရဲ့အံ့သြဖွယ်စားသောက်ဆိုင်အချို့အတွက်အကောင်းဆုံးဗီယင်နာ strudel ကိုမြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်, နေ့လည်စာစား. အတော်များများကစားသောက်ဆိုင်နှင့်ကဖေးတစ် ဦး ကိုဆက်ကပ် 2-3 € 10 အောက်မှာများအတွက်သင်တန်း set ကို menu ကို.
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဂီတထဲကတစ်ညသည်, ကဖေးများစွာတွင်အခမဲ့ဂီတဖျော်ဖြေပွဲများရှိသည်. ဒါပေမဲ့, မင်းရဲ့ကျော်ကြားတဲ့အော်ပရာတစ်ခုမှာမင်းညကိုကြည့်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သင်အမြဲတမ်းစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်လက်မှတ်တွေရတဲ့အပေါ်သင်၏မျက်စိရှိသင့်ပါတယ်, သူတို့ကဂန္အော်ပရာလက်မှတ်တွေထက်သိသိသာသာစျေးနှုန်းချိုသာနေသောကြောင့်.
7. ဥရောပရှိလူကြိုက်အများဆုံးနေရာများ: နော်မန်, ပြင်သစ်
ရွှေကမ်းခြေ, Ruen ၏ Arc ၏ဂျုံး၏ဒဏ္ာရီပုံများ, Mont စိန့်ကျွန်း. မိုက်ကယ်ဘုန်းကြီးကျောင်း, နော်မန်ဒီမှာရှိတဲ့ကျောက်မျက်ရတနာအနည်းငယ်ပဲရှိတယ်. ဤလှပသောဒေသသည်ပါရီမြို့မှနှစ်နာရီခရီးဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်ပြင်သစ်မြို့တော်နှင့်မတူဘဲ, ၎င်းသည်ပြင်သစ်သို့သွားရန်အသက်သာဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
နော်မန်ဒီကိုအများအားဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှကမ်းခြေများသို့လူသိများသည်. သို့သျောလညျး, Etretat ရှိကမ်းပါးများဖြစ်သည်, gigရာမထုံးကျောက်ချောက်ကမ်းပါး၏, တစ် ဦး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာသဘာဝကအံ့သြစရာ. Claude Monet နေထိုင်ပြီးပန်းချီကားများကိုခြယ်သထားသည့်လှပသော Giverny ကျေးရွာသည်သင့်အားမလွဲမရှောင်သာနောက်ထပ်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည် နော်မန်သို့သွား.
ကောက်ချက်ချရန်, ဥရောပမှာခရီးသွားရတာအရမ်းတတ်နိုင်တဲ့စွန့်စားမှုတစ်ခုပါ. နော်မန်, Cinque Terre, ဗီယင်နာ, Eger, အသုံး, Cologne, နှင့် Cesky Krumlov, များမှာ7ဥရောပမှာသွားလာရန်တတ်နိုင်သောနေရာများ. ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အကြံပေးချက်များကသင့်ဘဝအသက်တာကိုအားလပ်ရက်တစ်ရက်တည်းမှာမနေစေဖို့နှင့်သင်ဟာအမှတ်ရစရာနှင့်အထူးခရီးစဉ်တစ်ခုရရှိရန်သေချာစေသည်.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အားလပ်ရက်များကိုဥရောပရှိစျေးအသက်သာဆုံးနေရာများသို့ရထားဖြင့်စီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်ကို“ ဥရောပတွင်ခရီးသွားလာရန်အတွက်အများဆုံးရနိုင်သောနေရာ (၇) ခု” ကိုသင်၏ဘလော့ဂ်တွင်တင်ချင်ပါသလား? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url =https://www.saveatrain.com/blog/most-affordable-places-europe/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, မင်းတို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးရထားလမ်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ် https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ja_routes_sitemap.xml, သင် / ja မှ / fr သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ကွမ်းခြံကုန်း မြတ်နိုး .ရာဝတီ ချက်သမ္မတနိုင်ငံ TrainTravelBelgium TrainTravelHungary travelfrance travelgermany
အဆိုပါ Bernina Express ကို၏အလှအပ
ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်